Dating soso-kevitra. Raozy toy ny Gifts.
amin'ny Kim Lance
Ny Unique Roses Fanomezana
Last nohavaozina: Aug. 19 2019 | 3 min namaky
Na ny mandeha amin'ny daty voalohany, mankalaza ny 10 taona tsingerintaona, na manolotra ny fanambadiana, raozy dia mety ho ny fanomezana tanteraka mba hameno misy tantaram-pitiavana fotoana. Ny fanomezana ny fanomezana ny raozy iray dia manome fahatsapana ny haja sy ny fotoam-pianarana izay mety hahatonga ny mpiara-miasa tena. Mpivady no maneho ny fitiavana ny olona iray hafa amin'ny raozy nandritra ny taonjato maro. Na izany aza, satria toy izany fanomezana iombonana, dia azonao atao ny mametraka hevitra bebe kokoa ny fomba ahafahanao manao ny fanomezana ny raozy tsy manam-paharoa. Aza mihazakazaka ny mety mijery Cliché eo imason'ny ny daty; ampio hevitra sasany mamorona ny fanomezam-pahasoavana. Misy fomba vitsivitsy mba hanome ny haja ny raozy, nefa mbola manao ny fanomezana famoronana:
1. Roses Tamin'ny Hafatra
Iray tsy manam-paharoa fomba mba hanome raozy toy ny fanomezana dia amin'ny alalan'ny fametrahana hafatra mivantana eo amin'ny felany ny raozy. Fa ny daty voalohany dia afaka mitondra flirty 'Hey Cutie’ voasoratra ao ny felany, na, fa ny fotoana toy ny tantaram-pitiavana ho toy ny tsingerin-taona, afaka manana 'tiako ianao’ voasoratra. Afaka mihitsy aza 've ianao hanambady ahy?’ raozy amin'ny tolo-kevitra ho toy ny tsy manam-paharoa fomba.
2. Gold voakarakara Single Rose
Fleuristes maro (ary na dia misy jewelers) dia hivarotra raozy izay voakarakara amin'ny volamena. Na dia hitentina anao bebe kokoa noho ny am-polony raozy tapaka, samy namboatra volamena iray dia afaka manampy ny raozy haavon'ny fitiavana lalina ny fanomezana, tsy lazaina intsony ny famoronana. Mandray soa hafa koa ny volamena samy namboatra ny raozy dia izay maharitra ela kokoa noho ny mahazatra raozy. Roses dia matetika enameled ka samy namboatra volamena mba hanome azy ireo ny fijery madio voapaika raozy tamin'ny volamena Sparkle manokana.
Maro ny vehivavy (ary ny sasany ihany koa ny lehilahy) tia voninkazo efa ho araka izay tia sôkôla. Nahoana no tsy hanome fanomezana roa iray nitsangana ny sôkôla! Gourmet sôkôla sy ny fivarotana vatomamy matetika mivarotra sôkôlà izay niforona ho endrika tsy manam-paharoa ho an'ny fotoana manokana fanomezana. Iray amin'ireo endriky matetika tamin'ny endrika iray monja raozy. Afaka mividy iray nitsangana, na mividy sokola am-polony sy handamina azy ireo toy ny fehezam-boninkazo izy ireo ny tena raozy. Raha ny daty tia sôkôla izy (na izy) Azo antoka fa ho faly no gaga.
4. Rose iray miavaka eo amin'ny The Vahoaka
Raha toa ianao mihevitra ny hanome fanomezana ny nentim-paharazana ny am-polony raozy, fa te hanampy fa famoronana fanampiny flair, any ny florist sy mividy 11 raozy mena, ary 1 miloko miavaka raozy. Roses afaka ny ho tonga amin'ny loko isan-karazany mba ho azo antoka ny raozy tokana dia ampy ny iray kosa mba hitsangana avy amin'ny 11 raozy mena, fa ny loko tsy ady amin'ny hafa raozy. Rehefa hamonjy ny fehezam-boninkazo milaza ny olona iray manokana fa ny hatsaran-tarehy mahavariana mahatonga azy hiavaka amin'ny sisa amin'ny vahoaka ary ny tokan-tena nitsangana tsara tarehy fa atokana avy amin'ny vondrona raozy mena maneho fa ny hatsaran-tarehiny manokana namanao.
Ireo no fomba miavaka efatra mba hahatonga ny fanomezam-pahasoavana ny raozy no nisy vokany matanjaka ny manan-danja hafa. Raha raozy dia fanomezana tena tsara ny hankalaza ny havanao na ny fotoana manokana eo amin'ny fifandraisanareo, manampy ny sasany famoronana amin'ny alalan'ny fampiasana ny iray amin'ireo hevitra mety hanampy anao bebe kokoa hampiseho ny zavatra tsy manam-paharoa ny namanao no fiantraikany teo amin'ny fiainanao sy asongadintsika bebe kokoa ny halehiben'ny mikarakara azy ireo. Izany koa dia faly Heroda miteraka fahatsiarovana ho an'ny havanao mba harena ho an'ny taona ho avy.
Instant Checkmate ny Torolalana ho Spotting Fake Online Daters
Ny Art Of ny filalaovana fitia
5 Soso-kevitra Mba ho A Lehibe Voalohany Online Dating Impression